Teardown: iyo chaiyo yekuparadza yevhidhiyo mutambo iwe wauchada paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Teardown ndeimwe yeavo mavhidhiyo emitambo mazita ayo vanhu vanozobvunza kuendesa kuGNU / Linux. Parizvino iri kugadzirirwa iyo Microsoft Windows chikuva, uye haisati yabuda. Iva inotarisirwa kuburitswa imwe nguva mugore rino 2020. Saka iri kuuya munguva pfupi ...
Zvichida kuti nekuda kweValve's Steam mutengi weGNU / Linux uye chirongwa cheProton unogona kuchimhanya pasina matambudziko kubva kune yako yaunoda distro. Asi zvaizogara zvirinani kana TuxedoLabs deign kugadzira chiteshi chemo chedu chedu chekushandisa. Ehezve, kunyangwe ivo vachiivhura yeLinux kana iwe ukaishandisa neProton, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe uchazoda Intel Core i7 kana AMD Ryzen processor, 4GB ye RAM, NVIDIA GeForce GTX 1080 kana zvimwe zvekupedzisira kubva ku AMD, se pamwe ne500 MB yemahara hard disk space ...
Mune mamwe mazwi, iri mutambo unodikanwa wevhidhiyo maererano nemidziyo yemahara mune dzimwe nzira. Asi zvisinei nazvo, Dennis Gustafson, Yakagadzira inonakidza yevhidhiyo mutambo kubva pakuona kwe kuparadzwa kwenzvimbo dzese iyo yakakukomberedza. Chinhu chisina kubvumidzwa nemitambo yakawanda yemavhidhiyo kana icho chingobvumidza kukuvara kune zvimwe zvinhu zvemuzvikamu uye zvimwe zvacho hazviparara.
Kureruka kwemutambo uyu kwakanaka, asi zvakare kunoratidzika kunge kunopindwa muropa. Nezve mafirimu, inoyeuchidza minecraft nezvimwe zvakadaro. Asi iko kugona kwekudyidzana nemhoteredzo yakakukomberedza kunoita kuti ive yakakosha.
Kana iwe uchida kusunungura kumwe kunetseka kwatova nevazhinji vashandisi Vari kukumbira kuzvibata kubva kumusangano weSteam. Muchokwadi, mutambo unoshandisa OpenGL, saka zvingave nyore kutakura. Ungazvifarira here? Kana zvirizvo, unogona kusiya zvaunotaura pane yeValve chikuva foramu uye nekudaro woisa zvishoma kumanikidza kumusiki kuti afare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Teardown: iyo chaiyo yekuparadza yevhidhiyo mutambo iwe waunoda paLinux
Zvikuru izvo! Ini ndatoona mutambo uyu uye ndakafunga kuti haizove ye linux asi ini ndinoona kuti ndizvo
Ndatenda kwazvo LInux Vakapindwa muropa